Testamentan'i Abrahama - Wikipedia
Ny Testamentan'i Abrahama dia soratra apokrifa na pseodepigrafikan'ny Testamenta Taloha, izay mety voasoratra tamin'ny taonjato voalohany na faha-2 taorian'i J.K. Jiosy no nanoratra azy sady heverina ho isan'ireo soratra apokaliptika. Na ny fivavahana jiosy na kristiana dia samy tsy mandray azy ho boky masina. Heverina ho iray amin'ireo boky telo miaraka ka ny roa hafa dia ny Testamentan'i Isaka sy ny Testamentan'i Jakoba, na dia tsy misy zavatra manaporofo fa tao anaty boky tokana izy ireo. mifototra amin'ilay atao hoe Tso-dranon'i Jakoba izay hita ao amin'ny Baiboly ireo boky telo ireo.
Toerana sy fotoana nanoratana azyHanova
Ny Testamentan'i Abrahama dia mety ho voasoratra amin'ny fiteny grika tany am-piandohana, ka olona niaina tany Ejipta no nanoratra azy noho ilay boky ahitana voambolana mitovy amin'izay hita ao amin'ireo boky faramparany ao amin'ny Septoaginta (na Septanta), izay nosoratana tamin'ny fotoana mitovitovy, sy ao amin'ny boky hafa toy ny Bokin'ny Makabeo izay fantatra fa nosoratana tao Ejipta tamin'izany fotoana izany. Ankoatra izany, misy toetry ny fitantarana hita ao izay hoatry ny ahitana taratra ny endriky ny fiainan'ny olona tao Ejipta, ohatra amin'izany ny ireo fitsarana telo maneho ireo dingana telo eo amin'ny fitondram-panjakana ejipsiana. Nefa ny filazana fa avy ao Ejipta ny Testamentan'i Abrahama dia tsy mitombina afa-tsy ho an'ny endrika lavan'ilay boky fa tsy ho an'ny endrika fohy. Tsy fantatra ny toerana sy ny fotoana nanoratana ny endrika fohin'ilay boky na dia heverina fa rariny raha mitovy fiaviana amin'ny endrika lava izany. Mitovy, amin'ny ankapobeny, ny zavatra resahina ao an'ny endrika lava sy ny endrika fohin'ilay boky na dia indroan'ilay fohy ny halavan'ilay endrika lava.
Famintinana ny Testamentan'i Abrahama, endrika lavaHanova
miresaka ny amin'ny tsy faharisihan'i Abrahama ho faty sy ireo fomba nahatongavan'ny fahafatesany io Testamenta io.
Toko voalohany: Niteny tamin'ny arikanjely Mikaela (na Misely) mba "hidina hijery an'i Abrahama sy hiady hevitra aminy ny amin'ny hahafatesany, mba hahafahany mandamina ny raharahany." Ahitana fitanisana ireo toetra tsaran'i Abrahama ao, izay manantitra ny fitiavany mandray vahiny sady maneho fa izy no "hazo oakan'i Mamre" (na Mambre), izany dia tsy hita ao amin'ny endrika fohin'ilay boky.
Toko faha-2: Nidina ety an-tany ny anjely Mikaela ka nahita an'i Abrahama tao an-tanimboly. Nifampiarahaba izy roa dia nametraka fanontaniana vitsy momba ny niaviany i Mikaela ka noheverin'i Abrahama ho olombelona ihany ilay anjely. Nasain'i Abrahama ho any an-tranony ilay arikanjely, noho izany, sady nomeny azy ny soavaliny mba hitaingenany ho any nefa nolavin'i Mikaela izany.
Toko faha-3: Teny an-dalana mankany an-trano dia nisy hazo kipresy niteny tamin'i Abrahama, nefa tsy niraharaha an'ilay hazo i Abrahama. Rehefa tonga tao an-trano izy dia niteny tamin'i Isaka zanany mba hanasa ny tongotr'i Mikaela. Nampitomany an'i Mikaela izany ka nanjary vatosoa ny ranomasony. Tsikaritr'i Isaka fa tsy olombelona akory i Mikaela. Nangonin'i Abrahama ny ranomason'i Mikaela izay nanjary vatosoa.
Toko faha-4: Niverina any an-danitra i Mikaela ka nilaza tamin'Andriamanitra fa tsara fanahy loatra i Abrahama ka sarotra ny hiresaka aminy ny amin'ny hahafatesany. Nampantena ny handefa nofy amin'i Isaka Andriamanitra hanehoany ny hahafatesan'i Abrahama. Ao amin'ity toko ity no iresahana ny fonombohan'ny fikarakarana ny sakafo, ary nilaza amin'i Mikaela Andriamanitra fa izy no hanambara ny hevitr'ilay nofy. Tsy milaza ny anton'ny niverenan'i Mikaela tany an-danitra ny Testamentan'i Abrahama amin'ny endriny lava. Ny endrika fohin'ilay boky no milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra ny anjely rehetra isaky ny milentika ny masoandro.
Toko faha-5: Niverina tety an-tany i Mikaela ary niara-nisakafo tamin'i Abrahama. Natory i Isaka ka azony nofy ny hahafatesan'i Abrahama, na dia tsy voalaza aza ny votoatin'ny nofy. Nandeha haingana tany amin'i Abrahama i Isaka ka namihina azy sady nitomany dia nitomany koa i Abrahama sy i Mikaela. Niditra tao an-trano i Saraha vadin'i Abrahama ka nanontany ny antony mampitomany azy ireo. Nihevitra izy fa vokatry ny fanambaràn'i Mikaela ny amin'ny hahafatesan'i Lota izany.
Toko faha-6: Amin'i Saraha dia iray amin'ireo anjely voalaza ao amin'ny Genesisy (na Jenezy) i Mikaela (Jereo: Gen. 18) ary tsapan'i Abrahama izany fa marina tamin'ny nahatsiarovany fa nitovy tongotra tamin'ireo vahiny telolahy ao amin'ny Genesisy, izay nosasany tongotra, izy. Porofo fanampin'izany ny fiovan'ny ranomason'i Mikaela ho vatosoa.
Toko faha-7: Nitantara ny nofiny i Isaka. Nisy "lehilahy be herim-po" nandray ny masoandro sy ny volana tamin'i Isaka. Nambaran'i Mikaela azy ireo hoe iza izy sady i Abrahama io masoandro io, i Saraha io volana io ary ilay lehilahy be herim-po naka ny masoandro sy ny volana dia ny fahafatesan'i Abrahama sy i Saraha. Niteny tamin'i Abrahama i Mikaela mba handamina ny raharahany. Tsy nanaiky handeha anefa i Abrahama.
Toko faha-8: Nandeha haingana tany an-danitra i Mikaela ka nitatitra ny fandavan'i Abrahama. Nanao lahateny tamin'i Mikaela Andriamanitra izay tokony hampitainy amin'i Abrahama. Ao amin'izany lahateny izany no ilazan'Andriamanitra ny tso-dranony ho an'i Abrahama sy ny tokony tsy handavan'i Abrahama ny sitrapony.
Toko faha-9: Nangataka ny mba hahita an'izao rehetra izao i Abrahama alohan'ny hahafatesany. Nampitain'i Mikaela tany amin'Andriamanitra izany fangatahana izany ka neken'Anadriamanitra.
Toko faha-10: Nentin'i Mikaela tamin'ny "Kalesin'ny Kerobima" i Abrahama mba hijery izao rehetra izao, ka isan'izany ireo mpanota, ireo mpamono olona, ireo mpijangajanga sy ireo mpangalatra. Raha nahita ireo mpanota ireo izy dia nangataka ny hamonoana azy ireo amin'ny fomba samihafa, dia nekena izany fangatahany izany.
Toko faha-11: Nentin'i Mikaela any an-danitra amin'izay i Abrahama ka nahita varavarana kely sy varavarana lehibe ary lehilahy mipetraka eo ambony seza fiandrianana eo afovoan'ireo varavarana roa ireo. Mandany ny ankabeazan'ny fotoany amin'ny tomany ilay lehilahy. etsaka Betsaka ny olona miditra eo amin'ny varavarana lehibe fa vitsy kosa ny olona miditra eo amin'ny varavarana kely. Takatr'i Abrahama amin'izay fa varavaran'ny mpanota mankany amin'ny fanamelohana mandrakizay ilay varavarana lehibe fa ilay kelikely kosa no idiran'ny fanahin'ireo olo-marina ho any amin'ny Paradisa, ary ilay lehilahy dia i Adama izay mifaly rehefa misy fanahin'olombelona voavonjy ary mitomany kosa rehefa misy fanahy voaheloka.
Toko faha-12: Nankany amin'ny toerana itsarana ny fanahin'olombelona i Abrahama avy eo. Nahita fanahy eo afovoan'ny tsara sy ny ratsy izy. Lehilahy iray mipetraka eo ambony seza fiandrianana no mitsara ny fanahin'olomelona. Misy anjely efatra mitsangana eo an-tongony, anjely roa no misahana ny fanoratana, anjely iray mailamailaka sy anjely iray hafa mitazona mizana handanjana ireo fanahin'olombelona. Tamin'ny nisehoan'i Abrahama dia nisy fanahy iray nolanjaina eo am-pitsarana azy.
Toko faha-13: Nangataka hahalala an'ilay mpitsara sy ireo mpanampy azy i Abrahama. Namaly i Mikaela fa i Abela io mitsara io sady nanazava fa amin'ny fitsarana farany dia hisy mpitsara roa hafa hanampy an'i Abela: aorian'i Abela dia hotsarain'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely ny olona tsirairay ary farany dia hotsarain'Andriamanitra. Nohazavain'i Mikaela amin'izay ny antom-pisian'ireo anjely samihafa: ny iray amin'ireo mpitan-tsoratra dia manoratra ny asa tsara rehetra ataon'ny olombelona, ny iray hafa mandraikitra an-tsoratra ny fahotana rehetra nataon'ny olombelona ary ilay anjely mihazona mizana, atao hoe Dôkiela, dia mandanja ny fahotana sy ny asa tsara nataon'ny fanahy tsirairay, fa ilay anjely mailaka, atao hoe Poriela, dia misedra ny fanahin'olombelona rehetra amin'ny afo.
Toko faha-14: Nivavaka ho an'ilay fanahy tsaraina ao amin'ny toko faha-12 i Abrahama, ka resy lahatra Andriamanitra fa hanavotra an'io fanahy io. Tapa-kevitra i Abrahama fa ny fanamelohana mandrakizay an'ireo mpanota, ao amin'ny toko faha-10, dia fahadisoana, ka nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hamonjy azy ireo. Nanaiky izany Andriamanitra. Tsy hita ao amin'ny Testamentan'i Abrahama amin'ny endriny fohy ity fitantarana ity.
Toko faha-15: Niverina tety an-tany i Abrahama sy i Mikaela. Nanamafy i Abrahama fa tsy handeha hiaraka amin'i Mikaela, ka niakatra any an-danitra haingana i Mikaela mba hampandre an'Andriamanitra ny amin'izany. Ao amin'ny boky amin'ny endriny fohy dia ato amin'ity toko ity no itantarana ny nahafatesan'i Saraha.
Toko faha-16: Nandefa an-dRafahafatesana izy, izay niseho tamin-katsaran-tarehy, Andriamanitra mba haka an'i Abrahama. Nanambara ny tenany Rafahafatesana nefa tsy nino izany i Abrahama. Ao amin'ny Testamentan'i Abrahama amin'ny endriny fohy dia i Mikaela no naka ny endriky ny Fahafatesana.
Toko faha-17: Niady tamin-dRafahafatesana i Abrahama ka mbola tsy nino fa ny fahafatesana io olona manoloana azy io. Nitaky porofo tamin-dRafahafatesana amin'izay i Abrahama. Tamin'izay no nahafatesan'ny mpanompo maro: 7 000 no isan'ny maty (fa 7 kosa ao amin'ny boky fohy).
Toko faha-18: Nangataka tamin'Andriamanitra i Abrahama mba hamelona ireo mpanompo ireo. Lasa tsara tarehy indray Rafahafatesana. Nisy ady hevitra ny amin'ny tokony hahafatesan'ireo mpanompo ary nandresy lahatra an-dRafahafatesana mba homba ny fivavahany an'ireo mpanompo i Abrahama.
Toko faha-19: Nandresy lahatra an-dRafahafatesana i Abrahama mba hamela azy sy hampiavy an'i Mikaela. Tsy nanatanteraka izany eo no ho eo Rafahafatsana ka nasain'i Abrahama nolazainy ny anton'ny haratsian-tarehiny.
Toko faha-20: Novonoin-dRafahafatesana i Abrahama tamin'ny farany. Niangaviany i Abrahama mba hanaraka azy, nefa nilaza i Abrahama fa malemy loatra ka tsy haharaka azy. Nandresy lahatra an'i Abrahama Rafahafatesana mba nanoroka ny tanany dia hahatsiaro matanjaka kokoa. Nentina namono an'i Abrahama anefa izany fanorohana izany. Nalevina nhy vatan'i Abrahama fa ny fanahiny kosa nakarina any an-danitra.
Lohatano sy fanamarihanaHanova
↑ 1,0 et 1,1 James H. Charlesworth: The Old Testament Pseudepigrapha; boky 1; (ISBN 0385096305); 1983; pejy faha-875
↑ Hazo oaka: chêne amin'ny teny frantsay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Testamentan%27i_Abrahama&oldid=816114"
Dernière modification le 1 Jolay 2018, à 16:57
Voaova farany tamin'ny 1 Jolay 2018 amin'ny 16:57 ity pejy ity.